ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှပဆုံး ရှုခင်းများ | ခရီးသွားသတင်း
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး ရှုခင်းများ
Mariela Carril | 05/05/2022 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 05/05/2022 17:59 | ခရီးသွားနေရာများ, လမ်းပြ
ပုံသဏ္ဍာန်လွှမ်းမိုးသောကမ္ဘာတွင်၊ ခရီးတစ်ခုစီစဉ်သောအခါတွင်၎င်းသည်ကြီးမားသည်။ အခင်းအကျင်းဖြင့် ဖြားယောင်းခြင်းမခံရဘဲ ထိုနေရာ၌ရှိရန် အရာအားလုံးကို အစီအစဉ်ချခဲ့သူမှာ မည်သူနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်နိုင်သည့်အရာများအပြင် ရှုခင်းများ၊ ရှုခင်းများ၊ အတွေ့အကြုံများက ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရီးသွားရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်စာရင်းတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
ဒါဆို ဒီနေ့ ကြည့်ရအောင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး ရှုခင်းများ. သင်ကံကောင်းပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ဆုံဖူးသူအချို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ?
1 Kirkjufell တောင်
2 Moher ၏ကမ်းပါး
4 Plitvice ရေကန်များ
5 Salar က de Uyuni
ဒီတောင် Iceland မှာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ Iceland မှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေ ရှိတယ် လို့ ပြောဖို့ ဒီအခွင့်အရေးကို ကျွန်တော် ယူပါတယ်။ အသက်ရှုကြပ်တဲ့ သဘာဝကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အခုပဲ ခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ သူမကို အမလို့ ခေါ်တယ်။ "ဘုရားကျောင်းတောင်" ပြီးတော့ Iceland ရဲ့ မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာ Grundarfjörour မြို့နှင့်နီးပြီး၊ အမျိုးသားမြို့တော်မှ နှစ်နာရီကြာ ကားမောင်းရသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ Snaefellsnes Peninsula ခရီးစဉ်ကို အပြီးအစီး သိအောင်လုပ်ပြီး ပက်ကေ့ဂျ်ကို ငှားရမ်းရင် ပါဝင်မှာ သေချာပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တောင်ကြီးရှိတယ်။ 463 မီတာ ကောင်းကင်တွင် ဖြတ်တောက်ထားသော သူ၏ရုပ်သွင်သည် ကုန်းကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းမှ ခရီးသွားများအတွက် လမ်းညွှန်အမှတ်အသားအဖြစ် အမြဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တောင်ခြေရင်းမှာ ရေကန်ရှိတယ်။ ကြည်လင်သောနေ့ရက်များတွင် လှပစွာရောင်ပြန်ဟပ်နေသော တောင်၊
ဒါ့ပြင် တောင်ကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီအလိုက် အရောင်ပြောင်းသည်။: နွေရာသီတွင် စိမ်းလန်းသော၊ ဆောင်းရာသီတွင် အညိုရောင်နှင့် အဖြူရောင်ရှိပြီး ဇွန်လ သန်းခေါင်ယံနေရောင် ထွန်းလင်းသည့်နေ့များတွင် တကယ်ကို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ တစ္ဆေခြောက်လှသော မြောက်ဘက်မီးရောင်အောက်တွင် ပြောစရာမရှိပေ။စက်တင်ဘာနှင့်ဧပြီကြား။
အနီးနားတွင် ညင်သာစွာ လမ်းလျှောက်သွားကြသည်။ Kirkjufellsfoss ရေတံခွန်။ ဤရေတံခွန်များတွင် သေးငယ်သော ခုန်ခြင်းနှင့် ပျော့ပျောင်းသော ရေစီးကြောင်း သုံးခုရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကြားရှိ အမြင့်ကွာခြားမှုသည် ၎င်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တောင်တက်ခြင်းကို စိတ်ပါဝင်စားပါက တောင်ပေါ်နှင့် ရေတံခွန်များတွင် ရှုခင်းကောင်းများကို ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအချက်မှာ တောင်ကြီး season7မှာပေါ်လာတယ်။ Thrones ၏ဂိမ်း"Behind the Wall" ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်၊
ဤလှပပြီး အထင်ကြီးစရာ ရှုခင်း အိုင်ယာလန်မှာရှိပါတယ်။ Burren ၏ ယေဘုယျရှုခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အတ္တလန်တိတ်ကိုကြည့်ကာ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ၁၄ ကီလိုမီတာအကွာတွင် ပြေးကြသည်။ ဘူမိဗေဒအရ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း 320 ခန့်က ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် UNESCO က ၎င်းတို့အား Burren Global Geopark တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
၎င်းတို့သည် နိုင်ငံအတွင်း အကျော်ကြားဆုံးသော ချောက်များဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးသော ချောက်များဖြစ်သည်။ သင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ Moher အတွေ့အကြုံ၏ချောက်ကမ်းပါးဤနေရာတွင် တစ်နေကုန်ကုန်ပြီး ကလေးများသည် ဝင်ကြေးမပေးရပါ။ တစ်ခုရှိပါတယ်။ 800 မီတာလမ်းများကွန်ရက် ဘေးကင်းပြီး ရှုခင်းများကို ခံစားနိုင်စေမည့် အကွာအဝေးရှိ Aran ကျွန်းများ၊ Galway Bay နှင့် Maamtaurks နှင့် အကွာအဝေးရှိ ကယ်ရီများကိုပင် ကြည့်ရှုနိုင်စေမည့် ဘေးကင်းသော ခင်းထားသည်။
အများအပြားကမ်းလှမ်းကြသည်။ ည့်လမ်းညွှန်များCounty Clare ရှိ Liscannor ရွာအနီး၊ အိုင်ယာလန်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိ ချောက်ကမ်းပါးများနှင့် ဧရိယာအကြောင်း လေ့လာရန်။ ကားဖြင့်၊ ဘတ်စ်ကား၊ စက်ဘီး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ကားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်တာလား။
အလည်အပတ်ခရီးကို သာယာသောနေ့ဖြစ်အောင် အမြဲလာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ပါ၀င်သောတရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ် သင့်ကိုယ်သင် ပိုကောင်းအောင် စည်းရုံးနိုင်ရမယ်။ အလုအယက်အချိန်ပြင်ပတွင် ချောက်ကမ်းပါးများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်ပြီး နေထွက်ချိန်နှင့် နေဝင်ချိန်များတွင် ရှုခင်းသည် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
ဧည့်သည်တော်စင်တာသို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် virtual reality ပြပွဲနှင့် ပြဇာတ်ရုံတို့အပြင် လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် O'Brien မျှော်စင်နှင့် ၎င်း၏လှေကားထစ်များသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသံလမ်းညွှန်၊ မြေပုံများနှင့် အချက်အလက်များပါ၀င်သည့် ဝင်ခွင့်အပြည့်အစုံကို သင်ပေးချေနိုင်ပါသည်။ အားလုံး ၇ ယူရို။
ဒီရေကန်ရှုခင်း သြစတြီးယားမှာရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါ ပို့စကတ်ပါ။ တောင်တန်းခရိုင်ထဲမှာ ရှိတယ်။ SalzkammergutHallstatt ရေကန်ဘေးနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဆားတွင်းအချို့နှင့် နီးသည်။ ၁၉ ရာစုအထိတော့ လှေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သိပ်အဆင်မပြေတဲ့ တောင်တက်လမ်းတွေပဲ သွားနိုင်ပေမယ့် ၁၉ ရာစုအကုန်မှာတော့ တောင်ကြောကိုဖြတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းဖောက်လုပ်မှုနဲ့အတူ အရာအားလုံးက ပြောင်းလဲလာတယ်။
နေရာက လှတယ်။ ရွာအလယ်မှာ စမ်းရေတွင်းတစ်ခုရှိပြီး ချစ်စဖွယ်စတုရန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ရှေးဟောင်းအသင်းတော်များGothic နှင့် neo-Gothic ပုံစံဖြင့်၊ ဦးခေါင်းခွံပေါင်း 1200 ပါသော လှပသော အရိုးအိုး၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်သည့် XNUMX ရာစု မျှော်စင်၊ ချစ်စရာကောင်းပြီး ငါးများပြည့်နှက်နေသည့် ရေကန်ကြီး၊ ရေတံခွန်များအပြင် နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကြားတွင်လည်း ရှိပါသည်။ အဆိုပါ5Fingers Lookoutပွင့်လင်းသော မြေပြင်နှင့် တောင်ပေါ်မှ ထွက်လာသော လက်ချောင်းများကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးတော့ အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဆားတွင်းများ လက်လွတ်လို့ မရဘူး။ သူမ က ပြောသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ဆားတွင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် နှစ်ပေါင်း ခုနစ်ထောင်ကျော် အမြတ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒီနေရာကို ခြေလျင်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ရထားနဲ့ သွားနိုင်သလို အတွင်းထဲမှာ ပြတိုက်တစ်ခုလည်း ရှိတယ်။
ဒီရေကန်တွေဟာ အံ့မခန်းပါပဲ။ ခရိုအေးရှားမှာ နိုင်ငံတွင်း သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ် အမျိုးသား ဥယျာဉ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယူနက်စကိုကလည်း ၎င်းတို့ကို ၎င်း၏စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဟုတ်တယ် ကန်များသည် ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနယ်စပ်ရှိ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ကာ့တ်ဧရိယာတွင် တည်ရှိသည်။
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ ရှိတယ်။ ရေကန်များနှင့် ရေတံခွန်များနှင့်အတူ စတုရန်းကီလိုမီတာ ၃၀၀,ဝဝဝ နီးပါး ကျယ်ဝန်းသည်။. ရေတွက်ကြသည်။ 16 ရေကန်များ ရေမျက်နှာပြင် စမ်းချောင်းများနှင့် မြစ်ချောင်းများစွာတို့ ပေါင်းဆုံမှု၏ ရလဒ်အဖြစ် စုစုပေါင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် မြေအောက်၌သာ ဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် ရေကန်များ ချိတ်ဆက်ကာ ရေစီးဆင်းမှုကို လိုက်နာသည်။ သူတို့ထဲတွင် ဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ သဘာဝ travertine ဆည်များရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ရေညှိ၊ မှိုနှင့် ဘက်တီးရီးယားတို့မှ သိုက်မြုပ်သွားခဲ့သည်။
ဤသဘာဝသားကောင်များသည် လေ၊ ရေနှင့် အပင်များနှင့် တစ်ချိန်လုံး ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး အလွန်သိမ်မွေ့ပြီး အသက်ရှင်လုနီးပါးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အမြဲကြီးထွားနေပါသည်။ ရေကန်များ စုစုပေါင်းကို အမြင့်တစ်ခုနှင့် အနိမ့်ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အမြင့် 636 မီတာမှ 503 မီတာအကွာအဝေး 8 ကီလိုမီတာကျော်ဆင်းသက်သည်။ ကိုရိုနာမြစ်သည် နိမ့်သောအမြင့်တွင် ကန်မှထွက်လာသော ရေများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒီခရိုအေးရှားကန်တွေ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အရောင်အသွေးကြောင့် ကျော်ကြားပါတယ်။, အစိမ်း၊ အပြာ၊ စိမ်းပြာရေထဲမှာရှိတဲ့ သတ္တုဓာတ်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး နေရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်တွေ အမြဲပြောင်းပါတယ်။ ရေကန်များသည် Adriatic ပင်လယ်နှင့် ကမ်းရိုးတန်းမြို့ Senj မှ 55 ကီလိုမီတာခန့် အကွာတွင်ရှိသည်။
Salar က de Uyuni
တောင်အမေရိကတွင် မယုံနိုင်စရာ ရှုခင်းများရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုသည် သေးငယ်သော ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ဘိုလီးဗီးယား။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးသော ဆားသဲကန္တာရကြီးမျက်နှာပြင် 10 စတုရန်းမီတာထက် အနည်းငယ်သာရှိသည်။
ဆားပြားမှာ တည်တယ်။ 3650 မီတာအမြင့် ဌာန၏ဌာနရှိ Daniel Campos ၏ဘိုလီးဗီးယားပြည်နယ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပိုတိုစီ၊ Andes ကုန်းမြင့်၌။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 40 ခန့်က ဤနေရာတွင် Lake Minchín ရေကန်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အခြားသောရေကန်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရာသီဥတုသည် စိုစွတ်လာပြီး ခြောက်သွေ့ပူနွေးလာကာ ဆားပြားများကို ထုတ်ပေးပါသည်။
ဆားဖြစ်ပုံရသည်။ ဆားတန်ချိန် ၁၀ သန်းခန့် ပါဝင်သည်။ နှစ်စဉ် တန်ချိန် ၂၅ဝဝဝ ထုတ်ယူသည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်တွင် ဆားသည် အရေးကြီးသော အရာမဟုတ်၊ Uyuni တွင်လည်း လစ်သီယမ် ပါရှိသည်။ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာသုံး စက်များအားလုံး၏ ဘက်ထရီအတွက် လီသီယမ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် တူညီသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် သမုဒ္ဒရာထက် ငါးဆပိုကောင်းသောကြောင့် ဂြိုလ်တုများကို ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသည်။
ဆာလာ၏ အထူသည် တစ်မီတာနှင့် ဆယ်မီတာအောက် ကွာခြားသည်။ စုစုပေါင်းအနက်သည် 120 မီတာဖြစ်သည်။ဆားရည်အိုင်နှင့် ရွှံ့ကြား၊ ၎င်းသည် ဘိုရွန်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ် နှင့် လစ်သီယမ် စသည်တို့ပါရှိသော ဆားရည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းသည် ဘိုလီးဗီးယားတွင် အကျော်ကြားဆုံး ခရီးသွားနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကူးစက်ရောဂါမရှိပေ။ နှစ်စဉ် လူ ၃၀၀,ဝဝဝ ခန့် လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံး ရှုခင်းများ